10 Jilayaal Bollywood ugu caansan ahaana heerka koowaad sannadihii 2000-2018 (sawirro) – Radio Daljir
Seteembar 26, 2018 2:33 g 0
Kulanti wacan Saxiibadda ku xirran Radio Daljir. Maanta waxaan idiin soogudbinaynaa 10 jile ee Bollywood kuwooda ugu wanaagsan sanadihii 2000 ilaa 2018 oo haatan gabagabo ku dhow, waxaana jeclaysanay maanta inaan wax baddan ka ogaano Taarikhda Jilayaashaas iyo Filimadda ay kusoo caanbaxeen.
Jilaaga Caanka ah ee Reer hindiya ayaan ku bilaabayna waa Sharukh Khan oo dadka qaar u yaqanaan Abaha Jacaylka (Father of love), wuxuu dhashay 2 November 1965, wuxuuna ku dhashay Magaaladda New Dalhi ee dalka India. Xaaskiisa waxaa lagu magacaaba Gauri Khan, isagoo guursaday sannadka markuu ahaa 25 October 1991, saddex Caruur ah ayaay u dhashay oo kala ah labo wiil iyo Gabar oo magacyadooda kala yihiin AbRam khan, Aryan khan iyo Suhana.
Sharukhaan Jilidda Filimadda Wuxuu bilaabay Sanadihii 1988-1990 ,isago xiligaas filimadiisa Actorkan kusoo bandhigay Talefishinadda Waddanka India ,Filimkiisi ugu horeyeey wuxuu noqday Deewana (1992) ,waxaa kale oo kamid ah Filimadiisa la jecelyahay Darr (1993), Baazigar (1993), and Anjaam (1994) Baadshah (1999) sido kale Filimada kale ee ugu waanagsana abaalmarino qaali ahna uu ku helay kamid ahaa Kuch Kuch Hota Hai (1998), Om Shanti Om (2007), and Chak de! India (2007)
Maqaalo Kale 275 Wararka 19843